Ny Fandaniana Mandritra Ny Krismasy Shiliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2017 3:35 GMT
Ho avy ny Krisimasy. Manao topi-maso ny fihetsiky ny mpanjifa Shiliana mandritra ny fety ity lahatsoratra ity. Ary manoratra mikasika izay mety ho fanomezana ataon'ny Shiliana. Manoritsoritra ny fanomezana be mpivarotra indrindra i Luis Alarcon :
Inona no sakafon'ireo Shiliana rehefa Krismasy? Raha ‘pudding’ (godrogodro) ny an'ny Anglisy, ny Alemà kosa mihinana ny stollen ary ny an'ny Italiana pannettone, manana ny ” Pan de Pascua ” nentim-paharazana isika. Mofo ‘cake’ misy ‘noisette’ sy voankazo izy io.
Nanoratra momba ny fivarotana Pan de Pascua efa nomanina ao amin'ireo fivarotana roa lehibe ao Shily ny bilaogy Boliviana iray, Capacitacionencostos :
Matetika mankalaza miaraka amin'ny hazo Krisimasy nentim-paharazana ny fianakaviana Shiliana. Mety ho tsikaritra any amin'ny faritra malaza fa hikarakara izany ny kaominina, toy ny tao Iquique izay nasaina handrehitra hazo avokoa ny vondrom-piarahamonina rehetra tao Pozo Almonte. Araka ny nohazavain'ny extraiquique (ES) hoe: